ကိုရီးယားနိုင်ငံအဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပြပွဲ(AATE2013)Invitation Myanmar(미얀마) | 미얀마 버마 緬甸 Myanmar Burma
Mandalaywith 2013. 11. 7. 21:51
ကိုရီးယားနိုင်ငံအဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပြပွဲ Advanced Agricultural Technology Expo 2013 (AATE 2013) 한국첨단농업기술박람회 သို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားလိုပါသည်။
We are pleased to invite you to Advanced Agricultural Technology Expo (AATE2013).The biggest show organizer in Korea, KINTEX (Korea International Exhibition Centre) announced the launch of the 1st Advanced Agricultural Technology Expo(AATE) which will be held 5-8 December 2013 at KINTEX, Seoul, Korea.
AATE will focus mainly on all kinds of agricultural innovative technology and materials and is set to farmers, contractors and dealers from all over the world.
You will find new business partners and haveavaluable time trough AATE2013.
In this exhibition, the great korean agriculture items will be displayed
-Agricultural Technology and Application
-Plant Breeding & Cultivation
-Breeding and propagation of livestock and poultry
You could check more displayed items in Invitation Letter!!!
Crop Farming from sowing to harvesting
- Machinery, Equipment and Management for Professional Plant Production
- Agricultural Machinery, Equipment and Service – from sowing and storage
- Machinery, Equipment and Farm Inputs for crop production
- Software and Management Service
Exhibition Product & Service
Tractors / Farmyard and Front Loaders, Forage Harvesting, Tillage, Grain Harvesting,
Fertilizer Application, Forage Choppers, Technology for Municipal Application / Landscape
Conservation, Forestry Machinery, Feed Mixers, Special Crops / Vegetable Growing,
Energy Plants Production / Renewable Raw Materials, Plant Protection, Tyres and Wheels,
Root Crop Harvesting –Sugar Beets / Potatoes, Seed, Electronics / Precision Farming
/ Agricultural Software, Sowing Technology, Storage and Conservation of Harvest Products,
Components / Spare Parts, Transport Vehicles / Logistics, Ministries / Associations
/ Organizations, Irrigation / Sprinkler Irrigation
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောအဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပြပွဲ Advanced Agricultural Technology Expo 2013 (AATE 2013)သို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားလိုပါသည်။
AATEသည် အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောအဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုခင်းကျင်းပြသမည့် ပြပွဲတခုဖြစ်သည့်အပြင် ကမ္ဘာတ၀န်းလုံးမှ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရှင်များ ၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမည့် ပွဲကြီးတပွဲဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသောကုန်သည်ကြီးများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ မပျက်မကွက်တက်ရောက်သင့်သည့် နည်းပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အထူးဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့်
1. အသွား-အပြန် လေယာဉ်လက်မှတ် ( ရန်ကုန်-ကိုရီးယား-ရန်ကုန်)
2. မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကိုပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
3. ( ၃ ) ညဟိုတယ်နေထိုင်စရိတ်
4. ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် စကားပြန်စီစဉ်ပေးခြင်း
Mekong Korea Agriculture Forum & Community
အမှတ် - ၈၀၄ ၊ ၈ လွှာ ၊ ရသာကွန်ဒို ၊ မဟာဗန္ဒုလလမ်း နှင့် ၃၁ လမ်းကြား ၊
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဖုန်း - ၀၁-၃၈၉၀၈၃ ၊ ၀၉-၄၂၁၁၅၂၉၅၉
No 704, 8th Floor, Yathar Condo Btw Maharbandoola&31 Street PabedanTsp Yangon, Myanmar
Tun Tun Kyaw,Ms. Ngu&Thazin (Myanmar)
+95-1-389083/ HP: +95 09 421152959(TunTunKyaw)
ngthan13@gmail.com , Amethystamethyst600@gmail.com
Ms. Henna Heongsun Jeong (English )
+95-1-389083/ HP: +95 0931464436
Mobile: 09421152959 / Office:951-389-083
Skype : tuntunkyaw
Mail : tuntunkyaw80@gmail.com , mandalaywith@hanmail.net , tuntun@smemyanmar.net
website-- www.smemyanmar.net www.helloasean.com www.kamaf.net
KINTEX, 미얀마, 한국첨단농업기술박람회
◀ 이전 123456··· 61 다음 ▶